Ny runkeeper dia efa mamela antsika hampiofana amin'ny alàlan'ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Ny runkeeper dia efa mamela antsika hampiofana amin'ny alàlan'ny Apple Watch ihany
Tsy misy isalasalana, ny zava-baovao ilaina indrindra amin'ny Apple Watch Series 2 dia ny fanoherana lehibe kokoa ny rano sy ny GPS mifangaro. Misaotra ny GPS, ny mpampiasa ny famantaranandro paoma dia, ohatra, afaka mandeha mihazakazaka tsy misy iPhone ary ny Apple Watch dia hitahiry ny fampahalalana rehetra, ao anatin'izany ny làlana (somary) marina izay narahinay. Ny rindrambaiko farany manararaotra ny GPS tafiditra ao amin'ny taranaka faharoa amin'ny paoma famantaranandro dia Runkeeper, iray amin'ireo fampiharana ara-panatanjahantena fanta-daza amin'ny App Store.
Ny fanavaozana ny mpikarakara Runkeeper farany dia misy zavatra roa ao amin'ny lisitra famoahana 7.6: «Rehefa vita ny hazakazaka dia ho hitanao fa namboarina tamin'ny findainao ny làlana niaraka tamin'ny Apple Watch Series 2 (noho ilay GPS namboarina). Izahay koa dia manavao ny angon-drakitra Apple Watch rehetra ao anatin'izany ny tahan'ny kendrena, ny tahan'ny fo, ary ny kisary tanjaka famantarana GPS.«. Ireo zava-baovao roa dia apetraka aorian'ny lahatsoratra miaraka amina fahasoavana manokana izay raisin'izy ireo, efa ho telo volana taty aoriana, ny Apple Watch Series 2.
Runkeeper dia havaozina ao anatin'izany ny fanohanana ny GPS an'ny Apple Watch Series 2
Manohana ny mpiambina karazana fiofanana efatra amin'ny andiany faharoa amin'ny smartwatch an'i Apple: mihazakazaka, mandeha an-tongotra, bisikileta ary ny hafa. Toy ny fampiharana fanatanjahan-tena maro hafa, toa ny Strava sy Runtastic tiako roa, ny kinova Apple Watch an'ny Runkeeper dia mampiseho data toa ny halavirana, ny fotoana fampiofanana ary ny tahan'ny fo. Raha ny marina, izaho izay nanandrana maromaro tamin'ireo rindranasa ireo dia mino fa ny kinova fijerena fampiharana fampiharana rehetra dia mampiseho fampahalalana mitovy amin'izany.
Tsy misy isalasalana fa ny manatsara ny rindrambaiko ataon'izy ireo amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fanohanany ireo fitaovana farany ho tonga dia vaovao tsara ihany, na dia ekeko aza fa ny Runkeeper dia tsy ilay fampiharana izay tiako indrindra hamonjy ireo fanazaran-tenako. Inona ny fampiharana fanatanjahan-tena tianao indrindra?
Mpihazakazaka- Log GPSmaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny runkeeper dia efa mamela antsika hampiofana amin'ny alàlan'ny Apple Watch ihany
Vaovao farany ary winks ao amin'ny Stranger Things amin'ny fampisehoana
Apple Watch dia ao amin'ny lisitry ny vokatra azo averina azo ampiasaina Apple